SP-L08 SOICARE 300ml hanyanisi musoro wakasviba huni zviyo aromatherapy ultrasonic mafuta diffuser, China SP-L08 SOICARE 300ml hanyanisi musoro wakasviba huni zviyo aromatherapy ultrasonic oiri diffuser Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Sunpai Industries Limited
Packaging Details: 53.3x36x35cm / 12 zvidimbu
Kupa Mikana: 100000 zvidimbu mwedzi mumwe
Mhute: aromatherapy ine inotonhorera mhute, iyo inoshanda chinyararire, yakakodzera kwazvo kushandiswa muhupenyu nebasa. Iine huwandu hwe300ml, mhute inogona kugara anopfuura maawa gumi. Mhute inoburitswa iyi inoshambadza ingangoita 10-60ml / h, inokodzera nzvimbo 70-20㎡.
Kudzivirirwa: Yakagadzirwa ne auto-off function, iyo diffuser inomira kushanda otomatiki kana mvura yapera, kana nguva yakwana.
Chiedza: Iyi inonhuhwirira inoshambadzira ine 7 mavara e-LED mwenje. Zvakare, yega yega ruvara ine dhi uye yakajeka sarudzo, zvinoreva kuti mwenje unokwanisa kutenderera uine gumi nemaviri mavara. Kana, iwe unogona kuiisa kune imwe yakatarwa ruvara.
Nguva: Nebhatani "MIST", unogona kumisikidza mwero mhute uye yakasimba mhute, zvakare, iwe unogona kuseta 4 modhi timer: 1H, 3H, 6H uye inopfuurira. Iri basa rinokubatsira iwe kugadzira inodzikamisa uye inozorodza nharaunda.
chiyamuro AC100240V 50 / 60HZ
goho DC24V, 14W, 600mA
Nguva 1H / 3H / 6H / ON
Saizi yeyuniti Φ16.8 * 14.8cm
Ruvara rwebhokisi saizi 17 * 17 * 16.5cm
Ukuru hweCarton 53.3 * 36 * 35cm
NW / carton 7.50 Madzimabo
GW / katoni 8.50 Madzimabo
SP-L08 SOICARE 300ml hanyanisi musoro huni zviyo aromatherapy ultrasonic yematanda kunhuhwirira diffuser